सलमान खान आफ्नै घर अगाडी यसरी कु’टिए ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /International/सलमान खान आफ्नै घर अगाडी यसरी कु’टिए !
एजेन्सी । विश्वव्यापी भएको कोरोनाका कारण अहिले सबै क्षेत्रमा कृयाशिलहरु घरमै समय विताइरहेका छन् । बलिउड कलाकारहरु पनि अहिले सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएका छैनन् । आंशिक मात्रामा सुरु भएको सुटिगंमा पनि स्वास्थ्य संवेदनशिलता अपनाइएको छ ।
साँघुरो घेरामा कार्यक्रम भइरहेका छन् । अधिकांश कलाकार आफ्नो परिवारका साथमा समय विताइरहेका छन् । सुटिगं सुरु गरेकाहरुले पनि कार्यशैली परिवर्तन गरेका छन् । लकडाउनको समयमा अहिले धेरै कलाकारहरुका पुराना तस्बिर र अभिब्यक्ति भाइरल भइरहेका छन् । यतिबेला अभिनेता सलमान खानको एक तस्बिर र त्यो संग जोडिएको घटना भाइरल भइरहेको छ
बलिउडक कलाकारका पुराना फोटो र किस्साले सामाजिक सञ्जालमा निकै स्थान पाएका छन् । उनका फ्यानहरु आफ्नो मनपर्ने कलाकारका पुराना किस्सा हेरेर रमाइरहेका छन् । यहीबीच सलमान खानले कपिल शर्माको शोमा आफुलाई केहि मानिसले कु’टेको प्रसँग सुनाएका छन् । त्यो भिडियो अहिले निकै भाइरल भएको छ ।
सलमान खानका अनुसार एक समय उनको घर अगाडी सडकमा उभिएर एक फ्यान सलमानका भाइ सोहेल खानलाई गा’ली गरिरहेका थिए । सोहेल घरमै थिए । उनी आफुलाई किन कसले गा’ली गरिरहेको छ भनेर बुझ्न घरवाट बाहिर निस्के । उनी ति ब्यक्तिका नजिकै पुगेर मलाई किन गा’ली गरेको भनेर सोध्न थाले । तर उनी नजिकै मात्र के पुगेका थिए ति युवकसंग रहेका अन्य ५ जनाले सोहेललाई नै कु’ट्न थाले ।
आफ्ना भाइलाई पि’टेको देखेर सलमान पनि बाहिर निस्के । उनी भाइलाई बचाउन लागे । त्यती बेला अन्य केही ब्यक्तिले सलमानलाई नै कु’ट्न थाले । फिल्ममा सयौं गु’ण्डालाई तह लगाउने सलमान उनीहरुको कु’टाइ खाएर क’राउन लागे ।
उनीहरुले सलमानको ढाडमा गहिरो चो’ट लाग्ने गरी झ’ण्डाले हि’र्काए । सलमान भन्छन्, ‘जब ती मानिस मलाई कु’टिर’हेका थिए म कुनै हिरोको जस्तो रियाक्ट गर्नुको सट्टा ओ दु’ख्यो भन्दै चि’च्या’उँदै थिए ।’
सलमान खान लकडाउनको समयमा आफ्नो पनवेल फार्म हाउसमा बसेका छन् । यहि समयमा उनको तीन गीत ‘प्यार करोना’, ‘भाइभाइ’, ‘तेरे बिना’ रिलिज भएको थियो । सलमान अब ‘राधे योर मो’स्ट वा’न्टेड भाइ’, ‘कभी ईद कभी दिवाली’, ‘गन्स अफ नार्थ लाइन’ लगायत फिल्म मार्फत देखा पर्दैछन् ।